IHop Barn-indawo yokubalekela yaseKent emaphandleni - I-Airbnb
IHop Barn-indawo yokubalekela yaseKent emaphandleni
Ime kumbindi welizwe laseKent, esi sisele siyimbali senziwe sanamhlanje kodwa sigcina umlingiswa walo okhethekileyo kunye nomtsalane. IHop Barn yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka kubomi obuphithizelayo bemihla ngemihla apho unokonwabela ukuhamba kwiigadi zeziqhamo ezikufutshane okanye uhlale nje ebaleni umamele isandi sendalo.
Kwabo bafuna ukuphonononga, le barn ibekwe ngokufanelekileyo kufutshane neegadi ezidumileyo, iinqaba, amakhaya amahle, amahlathi, iilali ezinqabileyo kunye needolophu ezinembali.
I-Hop Barn inendawo yokuhlala ekhanyayo nebethwa ngumoya enamagumbi okulala amabini antofontofo alungele ukuzikhupha ngempela-veki emaphandleni aseKent. Ukubonelela ngekhitshi elinento yonke, indawo yokuhlala kunye nendawo yokutyela enazo zonke izinto onokuzisebenzisa ozidingayo ukuze uphumle. Sineqonga lomalusi elifumaneka kwi-paddock ukuba ungathanda ukuhlala nabahlobo okanye intsapho. Nceda uqhagamshelane nathi ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi okanye ujonge kwindlu yethu ye-Airbnb
elivulekileyo linazo zonke izixhobo nezixhobo ezifunekayo ukuze upheke isidlo esimuncis 'iintupha ngokuhlwa ukuba ungathanda ubusuku obutofotofo e- kunokuba ungene kwenye yeebhari zasekuhlaleni. Izixhobo ziquka i-hob, ioveni, ifriji/i-freezer, iketile eneti kunye nendawo yokwenza ikofu, umatshini wokuhlamba izitya, i-microwave, i-toaster kunye neKhitshiaid mixer.
Yithi zava kwisofa emile okanokutsho emva kokuhamba-hamba kwii-orchards emini kunye nencwadi entle, chitha imini imvula udlala enye yemidlalo yebhodi enikezelweyo okanye uphumle nje ngekomityi yeti (okanye iglasi yewayini!)
elinomnyango ophumela ngaphandle Igumbi lokulala eliyi-orchard linebhedi elala abantu ababini negumbi lokuhlambela elinomnyango ophumela ngaphandle ibe ungena ngqo everandeni apho unokonwabela ikofu yakho yasekuseni. Isidlo sakusasa sinokunikwa imveliso epheleleyo yasekuhlaleni ukuze kongezwe xa kucelwa.
Siya kuba lapho ukuze sikubulise xa ufika kwaye siya kufumaneka ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo ngexesha lokuhlala kwakho malunga nepropathi okanye umtsalane wasekhaya.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Staplehurst